‘द कपिल शर्मा शो’ मा के भयो ? एक जना प’क्राउ !
काठमाडौं : बलिउड हास्य कलाकार कपिल शर्मा दर्शकलाई मनोरन्जन दिने काम गर्छन, तर कहिलेकाहिँ अभिनेता वि’वादित पनि हुन्छन् । गत वर्ष कपिल शर्माले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । उनले कार डिजाइनर दिलीप छाब्रिया वि’रुद्ध उ’जुरी दिएका थिए।
अब यो घ’टनामा एक वर्ष पछि प्रहरीले एक्सन लिन सुरु गरेको छ । प्रहरीले कार डिजाइनर दिलीप छाब्रियाका छोरा बोनिटो छाब्रियालाई अहिले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीअधिकारीहरूले बोनिटोलाई सोधपुछका लागि बोलाएका थिए। सोधपुछको श्रृंखला समाप्त भएपछि उनी प’क्राउ परेका थिए।
वास्तवमा, गत वर्ष कपिल शर्माले एक उजुरी दिएका थिए कि २०१७ मा उनले दिलीप छाब्रियालाई ५।३ करोड रुपैयाँ भ्यानिटी भ्यान बनाउन दिएका थिए। तर उनीहरुले भ्यानिटी भ्यान पाएनन्।
कपिलका अनुसार उनले छाबरियालाई मार्चदेखि मे महिनाको बीचमा ५ करोड रुपैयाँ दिएका थिए, तर जब २०१९ पछि कुनै प्रगति देखिएन, कपिल शर्माले नेशनल कम्पनी कानून ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) मा सम्पर्क गरे।
घ’टना लगभग ४ वर्ष पुरानो हो:
यो घटना तब बढ्यो जब उनले कपिल शर्मा बाट २०२० मा भ्यानिटी भ्यान को लागी पार्किंग शुल्क को रूप मा १।२० करोड रुपैयाँ मागे। यस्तो अवस्थामा कपिल शर्माले पुलिसको सहयोग लिए र मु’द्दा दायर गरे।
जब यो मु’द्दाको छानबिन भयो, त्यसमा दिलीपका छोरा बोनिटो छाब्रियाको नाम पनि मु’छियो । यस पछि उनी सोधपुछ पछि प’क्राउ परे। द कपिल शर्मा शोले दर्शकहरुलाई फेरि मनोरञ्जन दिइरहेको छन्
दिलिप छाब्रियालाई मुम्बई प्रहरीले गत बर्ष करोडौंको कार वित्त पोषण घोटालामा प’क्राउ गरेको थियो।
कपिल शर्माको बारेमा कुरा गर्ने हो भने कपिल शर्मा शो को’भिड को दोस्रो लहर पछि ल’कडाउन को कारण बन्द भएको थियो। अब यसको नयाँ सिजन केहि हप्ता पहिले शुरू भएको छ र यो सु’परहिट कमेडी शो एक पटक फेरी प्रशंसकहरु लाई धेरै मनोरन्जन दिन सुरु गरेको छ ।
२०७८ आश्विन १०, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 96 Views
डिभोर्स पछि एक्लै रमाइरहेकी गायिका मिलन अमात्य